Kedu ihe a na-eji edochi Wunderlist? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Wunderlist otutu akaụntụ - a ngwọta na-
Wunderlist otutu akaụntụ - a ngwọta na-
Kedu ihe a na-eji edochi Wunderlist?
Ndepụta ahaagabigala n'ihu ọha, mana ị nwere ikedochieya na otu n'ime ngwa ọrụ ndị a. Microsoft si Mee ndepụta ngwadochie Wunderlistna Mee. Ndo,Ndepụta ahandị na-efe ofufe: Site na May, ị nwekwaghị ike iji ngwa ndenye ndepụta, onye nwe ya Microsoft kwupụtara na December.23 nwere ike 2020
Ndewo ndi mmadu ma nabata na Channel YouTube na-emeputa ihe.Ugbu a ị bịara ebe a n'ihi na ị nụla akụkọ Wunderlist, ọ bụrụ na ịnweghị mkpirisi oge, Wunderlist ga-emechi na May 6th na mgbe ịchọrọ Jiri ngwa a ruo na njedebe nke ụbọchị aYa nwere ike ịtụle ihe ọzọ iji tinye Ugbu a, dịka ị nwere ike iche n'echiche, edepụtara m ụfọdụ m ga-ekwu maka ya na otu ha nwere ike isi bụrụ maka gị, yabụ ka anyị bido site n'ile anya na edemede ato, nke mbu bu na mgbanwe, na usoro itinye aka gi na ihe bicarbonate nke ndepụta a, aga m ekwu okwu banyere udi nke abuo akpọrọ kwalite iji were ngwa gị ntakịrị n'ihu, aga m ekwu okwu banyere ụfọdụ uzo ozo ichoro ime ka ngbanwe? N'ọdịnihu na n'ezie, ị ga-amata na ị nwere ike iche obere ntakịrị gbasara ngwa ahụ.
Yabụ ka anyị bido, ka anyị bido mgbanwe ahụ ugbu a. O doro anya na ịchọrọ ịgbanwe ngwa a site na listi ndị na-ere ahịa na Microsoft. Ihe dị ukwuu banyere ya bụ na Microsoft ka na-arụ ọrụ ahụ ma ị nwere ike ibubata ndepụta gị site na May 6th na n'ime osisi nyocha, ụdị ejiji niile.
Ha nwere ọtụtụ atụmatụ gụnyere atụmatụ ọhụrụ dịka mybay na aro ka ị ghara ịhapụ ihe niile dị mma dị ka akwụkwọ ahụaja nke ndị na-eweta ọrụ na-enwebu ma echere m na ụfọdụ ahụmịhe ndị bụ isi ga-edepụta ịkekọrịta wdg. Ugbu a, enwere ngwa ọzọ m chere dị nso na ndepụta ndị na-ere ahịa n'ụzọ ụfọdụ. A na-akpọ ya doThey ọ bụla bụ ngwa nke dị adị nwa oge.
Na ọrụ ha kachasị elu. M ga-asị na ọ dabara na ahụmịhe na ndepụta nke ndị na-eweta m ga-elele anya. Gịnị dị ezigbo mma bụ na ị nwere ike ịtụ ihe niile na ndepụta? Ha jikọtara AI iji nyere gị aka ịhazi arụpụta gị na atụmatụ n'ihu, nke bụ ngwa abụọ Microsoft na-eme, na ihe niile kwesịrị ime, ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị okike zuru oke nke ahụmịhe ndepụta ndị na-ere, ugbu a ọ bụrụ na ị bụ n'ezie na-achọ iji nweta nkwalite, ị nwere ike iji oge a laa, enwere m ike ịrụ ọrụ ole na ole yana aka nka ole na ole nwere ike inyere m aka.
Ndị a bụ ọrụ abụọ ma ugbu a isi ihe abụọ mbụ m ga-ekwu na m ga-asị na ọ bụ ezigbo ihe niile na-enye gị ezigbo ahụmịhe, ị nwere ike ịgbanwe ọrụ ọ bụla n'ime akaụntụ Todoist ọhụrụ gị mgbe ịchọrọ ịbanye, yana nke ahụ na-aga maka ya maka akọrọ, dịka ọmụmaatụ ihi ụra kwa mgbede na elekere 11 nke abalị Ọ ga-abụ ọrụ ugboro ugboro, mana ọ ghọtara n'ezie na ide ederede asụsụ nwere ụdị atụmatụ dị iche iche, dị ka inwe ike ịmepụta subtasks ị maara sitere na ọrụ ọrụ, gụnyere ọrụ na ọrụ n'ọdịnihu dị ka mbadamba ahụ ịchọrọ ahụmịhe bit n'ihu ugbu a bụ ihe ọzọ na ngwa ticktick.
Ihe mere m ji chọọ biputere nke a bụ na ọzọ na ọ nwere ezigbo mbubata maka mgbere ndepụta ọrụ. Mana ihe m masịrị ya bụ na ọ nwere ọtụtụ egwuregwu karịa ka ị na-arụ ọrụ na-eme ka nrụpụta gị na-arụ ọrụ, mana ọ nwekwara isiokwu ndị dị egwu na-agbatị n'ofe oge. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu mara mma nke oge oyi na-egosi n'azụ akaụntụ gị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nnukwu ihe bụ na ịnwere ike iji Kanban hazie ọrụ gị yana ọ na-agbakwunye ụyọkọ atụmatụ gị agaghị enwe na ndepụta ndị na-ere ahịa, yabụ nke ahụ bụ ihe ị ga-atụle itinye ihe dị ka ihe ndị ka mkpa, ịmara ndenye asụsụ dị ka nke ị na-emebeghị, yana ntọala ntọala oru ngo dị ka ndepụta ndị mara mma iji nyere gị aka ịmepụta ndepụta ndị ahụ.
Ha na-emekọrịta mmekọrịta karịa ịsị ọbụna Microsoft - Duze ma ọ bụ ndị na-ere ere, ọ dị mma Yabụ ndị ikpeazu m chọrọ ịkwado bụ ihe ndị ọzọ na ngwa abụọ ndị a, agbanyeghị na ha yiri usoro arụpụtaghị ihe dịka ha nwere ndepụta maka gị- Ndepụta nwere ike ịga n'ihu ntakịrị, mana ọ ga-amasị m iwebata ha. Nke mbụ bụzi ihe nke atọ mgbe ịnọ na obere ego. Kwuo na ị na-eji ngwaọrụ Mac ma ọ bụ Apple.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ngwa maka gị. Ọ bụ ngwa ndepụta nke ga-efu $ 49.99 na Mac yana $ 9.99 na iOS ma ọ bụrụ na ị na-eji ụdị iPad ahụ bụ $ 19.99 nke ahụ bụ oge otu oge, ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla maka ndepụta ndị na-ere ahịa , n'ezie Nke a nwere ike bụrụ ihe ijuanya nye gị, mana ọ bara uru ịtụle ihe kpatara m na-ejikarị akwado ya n'ihi na ọ bụ ngwa dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndabere dị ogologo, ọ dị m ka eziokwu ahụ ị na-eme atụmatụ na iji Ijikọ kalenda gị na-enye gị ohere ịmepụta oge akara aka maka ịhazi usoro, mepụta ọrụ na mpaghara, yana kewaa ọrụ dịka pụrụ iche maka abalị a ma ọ bụ n'abalị a, nke dị mma.
Ngwa a haziri nke ọma. Ọ bụ ụlọ ọrụ akpọrọ mere ya. e mere ọkaibe koodu ma ọ na-n'ezie ọma tinye ọnụ otú i nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ya na-eburu ya.
M ga-ahụ na mezue njikọ na nkọwa na nke abụọ ngwa bụ echiche na mgbe m na-adịghị bụchaghị mgbe niile na-akwado ya maka Taskman agement, Echere m na a na ngwa na-ewebata ihe ndị dị ka tabular ọdụ data na ị nwere ike nụrụ na ha n'ezie -enye gị ohere ịhazi na ịtọọ oge ọrụ site na iji ndepụta iji mepụta echiche, mana ọ nwekwara ike inyere gị aka ịhazi ụfọdụ ọrụ gị. Amaara m naanị ihe mere m ji kwado nke a bụ n'ihi na amaara m ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị na-ere ahịa dịka ndozi ọkụ dị jụụ ma echere m na ị nwere ike ịme nke ahụ nke ọma ma ọ bụrụ na nke a sitere na nchekwa data okpokoro ma ọ bụ site na kwa izu burukwa nke dá »‹ nná »á» nná »mfe igbe iji mee ka á» ‹malitere. Yabụ enwere ndụmọdụ m niile, ụmụ okorobịa.
Ka anyị gabiga nke a maka ịgbanwere ngwa. Eleghi anya ịchọrọ ime ma ọ bụ ime Microsoft ma ọ bụrụ na ịchọrọ imelite, lelee Todoist ma ọ bụ Akọrọ akọrọ na ọ bụrụ na ị na-achọ a ubé dị iche iche ọzọ nwere ike inupụ ókè nke gị arụpụtaghị. Ndị a bụ ndụmọdụ m niile ma n'ezie ị nwere ike ịgụ nkọwa niile maka ngwa ndị a n'okpuru, mana ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ a kapịrị ọnụ ịchọrọ ndụmọdụ ụfọdụ na eg. ihe a ga-eji ngwa a.
Ekwesịrị m ikwu ole na ole n'ime ọnọdụ Are na-eji ngwa gị ugbu a? gaa email francesco na t - udo na-arụpụta na m ga-anwa ịkwado gị ole na ole.M na-enwekarị mmasị inyere gị aka na ngwa na Vandellas afọ atọ atọ anọ ma ọ bụ afọ ise afọ isii afọ asaa. na-anụ ọkụ n'obi inyere gị aka na ngwa ọhụrụ nke ga-ejide obere oge Ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịhụ ụzọ ndị a ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ ka ị na-arụ ọrụ. Gbalia igbenye aha na agam agwa gi okwu n’oge na adighi anya. Ma ọ bụrụ na ị kwagalarịrị, ọ ga-adị mma ịnụ ụfọdụ echiche gị n'okpuru, yabụ nweere onwe gị iwepụta ụfọdụ aro gị.
usoro dị iche iche mac
Ka o sina dị, ụmụ okorobịa, nnukwu ekele m na m ga-agwa unu okwu n'oge na-adịghị anya. Cheers. Onye obula. ka ọ dị
Gini mere Microsoft jiri gbuo ndi ozo?
“Gini mere ị gaghị edebeNdepụta ahana-agba ọsọ? ” ọ na-ajụ onwe ya na Ajụjụ. Nke a bụ azịza ya: “Kemgbe m sonyeereMicrosoftna 2015, anyị gbanwere uche anyị site na ụlọNdepụta ahaịzụlite Ime. Anyị akwụsịla ịhapụ atụmatụ ọhụrụ na mmeliteNdepụta aha, na ọ na-esiwanye ike ijigide ngwa ahụ ka ọ na-etolite.
You ga-enweta ntakịrị nkọwa zuru ezu na ndị mọnk na-adabere na ngwa ahụ na otu esi amalite ịmegharị listi gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma abụ m nke ọma, ị ga-ama nke a nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe yiri ya nke ọma na Ọrụ ahụ dịka ndepụta ndị na-ere. Anọkwa m na-edebe ụdị ndị na-ere ụdị maka oge, yana m na-atụgharị uche banyere ya nwa oge ugbu a, o doro anya na Microsoft kwadoro ya yabụ isi ha lekwasịrị anya na-eme ka ndị mmadụ mara banyere ọrụ ahụ weta ma nweta kpochapu ndepụta nke ugbu a na-enye ha ohere imechi ihe ndekọ niile ma nweta ụkwụ ha na nkwalite ahụ n'ihi na echere m na ndị na-ere ahịa enweela ọtụtụ ntinye aka n'oge na-adịbeghị anya, ọkachasị afọ gara aga n'ihi na ndị mmadụ ka na-aga Debanye aha maka ọrụ anaghị ekwe ka ndị mmadụ na-edebanye aha ọhụrụ ka m nwee ike ịhụ ọtụtụ mmadụ e nwere ndepụta vann na ekwentị ha dịka ha dị ka Flappy Bird Stays dị ka ụdị ụfọdụ nke memento nke ngwa nBut nke ga-ekpochapụ ngwa ahụ ugbu a ole na ole mon ths ago, Echere m na ọnwa abụọ gara aga, Triskin Reber bụ ex -CEO nke ndepụta ọhụrụ ahụ gbalịrị ma gbalịa ịpụ ya Agaghị m akpọ ya mkpọsa mana ụfọdụ ụdị ụzọ na mgbasa ozi mmadụ iji gbalịa ịzụta mgbe listi doro anya na listi anaghị arụ ọrụ na Microsoft, dịka ị maara, na-egbu egbu.
O doro anya na ọtụtụ ịkọ nkọ ugbu a banyere ihe ha ga-eme na ọrụ ahụ, echekwara m na ha ga-emechi ya ma debe ya na shelf, o doro anya na ha enweghị ike iji ya mee ọtụtụ ihe ugbu a na o doro anya na ahịa na imepụta ndi mmadu na ugbua ime na microsoft. Ndị ahụ bụ ndepụta ndị na-ere ahịa, yabụ ha ga-etinye oge ha na nlebara anya ha ugbu a. N'ezie, ị maara na e nwere ụfọdụ ezigbo ihe m ga-eme banyere Microsoft na ọ nwere ọtụtụ atụmatụ ahụ.
E nwere tebụl bara ezigbo uru dị n'okpuru ndepụta Bịa na ndepụta nke atụmatụ ndị dị na ndị nyocha na atụmatụ ndị a ga-arụ na Microsoft ugbu a, anyị bịara ebe a ịgafe ha ma ọ dịkarịa ala m 100% chere na ha mere nnukwu ọrụ. Know maara ọrụ ndị a ewerela. Echere m na ụbọchị m na aro m bụ ihe na-ewe ya ntakịrị, mana ụfọdụ n'ime ndepụta izizi na ndị ọzọ y ị maara na ikike ịlele ọrụ dị, yiri nke ndị na-ere ahịa.
Yabụ na ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ bicarbonate ka ị nwee obi ụtọ, yabụ ndị mmadụ, enwere m mmasị ịnụ echiche na echiche gị. Ikekwe Ọbụna Kesaa Njem Ndepụta Ndị Na-ebunye Gị Ọ bụrụ na Onye na-eweta Ndepụta Onye Na-enye Ihe na-akọwa na ihe ndị dị n'okpuru, ị maara na nke a nwere ike ịbụ ụdị ọnwụ maka ngwa na ịkekọrịta na ị maara etu ị si hụ ngwa ahụ n'anya yana otu ha si agwa gị banyere Oge enyerela aka Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụ naanị obere ekele nye ụlọ ọrụ anaghị m eche banyere Microsoft, mana site na listi ga-enyere gị aka ịmịpụta nke ọma, ụmụ okorobịa niile, ndị nyocha niile nwere ọrụ a, m na-atụkwa anya ụfọdụ ajụjụ gị. na nkọwa dị n'okpuru niile nkọwa dị n'okpuru ebe a, anyị na-ekele gị nke ukwuu, gbaa mbọ hụ na ịdenye aha na m ga-agwa gị okwu n'oge na-adịghị anya. Na-ekele onye ọ bụla.
Ndi wunderlist na-aga?
Microsoft mechara mechie ngwa ndepụtaNdepụta ahana May 6, 2020. Taa, Microsoft na-ekwupụta ụbọchị imechi makaNdepụta ahanke May 6, 2020. Mgbe ụbọchị a gasịrị,Ndepụta ahato-dos agakwaghị emekọrịta, mana ndị ọrụ ga-enwe ike ibubata ọdịnaya ha n'ime ngwa Microsoft nke Microsoft.9 kpebie. 2019
Enwere ike ịkekọrịta wunderlist?
Ndepụta aha, otu n'ime ndị njikwa njikwa kachasị mma na Storelọ Ahịa App, nwere ọtụtụ atụmatụ na-eme ka ọ dị mfe iji ya maka ọrụ otu ma ọ bụ makankekọrịtandepụta na ndị ezinụlọ.
Ndewo onye obula.
N'isiokwu nke taa, achọrọ m ikwu maka Wonder List, nke bụ otu n'ime ngwa ọdịnala m kachasị mma m na-eji kwa ụbọchị, ọ bụkwa ngwa nyocha-ịme. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịdekọ ma nke gị ma ọkachamara, Wunderlist bụ otu ngwa m na-akwado nke kachasị ma m na-eji ya ma eleghị anya afọ abụọ ugbu a ma jiri ya kwa ụbọchị. Enwere m ọrụ maka ụbọchị ahụ, enwere m ọrụ maka ọnwa ahụ, ma enwere m atụmatụ afọ zuru oke, ọ dịka usoro ụzọ m nwere na folda ọzọ.
Ya mere achọrọ m igosi gị otu ị ga-esi nweta Wunderlist, otu esi edozi ya, yana otu esi ahazi ngwa ahụ ka o wee nwee arụmọrụ kacha mma kwa ụbọchị, ma ị nwere ike mekọrịta ya n'etiti ngwaọrụ gị ka ị nwee ya na ekwentị gị na-aga na mgbe na-awụlikwa elu n'ime kọmputa na Anglịkan ma na ihe niile mekọrịta niile nyiwe na-eji niile dị iche iche na ngwaọrụ na-eji. Ya mere, ka anyị waba n'ime kọmputa. Aga m egosi gị usoro nbudata na usoro ntọala.
Ugbu a, ọ bụrụ na ọ bụ oge izizi gị ebe a, m na-eme nkuzi teknụzụ na nkuzi nkuzi, dị ka nke a ugboro ise n'izu. Biko tụlee ịdenye aha. Iji nweta Wunderlist, lelee wunderlist.com.
Enwere m njikọ na nkọwapụta weebụsaịtị ahụ ọ dịkwa maka nyiwe ndị a niile. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eji Mac na nke a, ọ ga-arụ ọrụ na Mac iPhone. Ọ na-ejikọrọ na-akpaghị aka n'etiti m Mac na iPhone n'etiti ngwaọrụ ozugbo m banyere, n'ihi ya, ihe ọ bụla m mere na Mac na-eme na iPhone, gụnyere iPad, mana mgbe ị mere gam akporo ma ọ bụ windo ekwentị bụ otu ihe ahụ budata ya mgbe m kụrụ download ebe a.
Achọrọ m ya iji gosi ya na Storelọ Ahịa ma ebe m na-eji ngwa a, ebudatara m ya ka m gaa n'ihu ma mepee ma ọ bụrụ na ị gaghị ekwe ka m gaa n'ihu ma mee nbudata mbụ Gaa na usoro ahụ . Ka m gaa n'ihu ma belata ndị a, ozugbo ibudatara ma mepee Wunderlist, nke a bụ ihe ngwa ahụ dị ka desktọọpụ. Yabụ ịkwesịrị ịga n'ihu ma mepụta akaụntụ nnabata ma ọ bụ banye.
Ebe ọ bụ na m na-eji nke a ogologo oge, aga m abanye na akaụntụ m ma ozugbo ị banyere n'ime ngwa ahụ ọ ga-adị ka nke a, o doro anya na akụkụ nke ngwa ahụ bụ oghere maka gị mana anọ m iji ya maka afọ ole na ole gara aga ka m wulitere ọtụtụ ebe a n'akụkụ, mana m ga-egosi gị otu esi emepụta ọrụ, otu esi ahazi ha, otu esi emepụta folda, na n'ụzọ m ' eji m ya, achọrọ m igosi gị otu m ga-esi nweta ọtụtụ ngwa a n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa a, lee nzere gị ma ị nwere ike ịpị mmekọrịta. Mgbe ibudatara ihe ndị a na ngwaọrụ ndị ọzọ, ha ga-emekọrịta.
Ugbu a ịkwesighi ime nke a oge niile. Ọ n'ezie na-eme ya na ndabere na ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Yabụ mgbe m gbakwunye ọrụ ọhụrụ ebe a, a na m ahụ ya nke abụọ ma emesịa na ngwaọrụ ndị ọzọ.
regsvr32.exe ngwa njehie
Ngwa a achọghị ka mmekọrịta ya ugbu a ka ọ na - akpaghị aka ma ị nwere ike ịdebanye aha ịbụ onye otu Pro nke na - enye gị ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ, nchekwa faịlụ na - akparaghị ókè, ụfọdụ obere subtasks na - akparaghị ókè, na ihe ndị dị ka ị nwere ike na n'efu Version anaghị egbu ya. Nke ahụ bụ ihe dị ka dollar ise kwa ọnwa. Agaghị m eme nke ahụ ugbu a.
Nwere ike ịgbanwe nzụlite gị ebe a. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ nzụlite dị iche, ịnwere ike ịgbanwe nke a ebe a, mana ka anyị kwuo na anyị jigidere ndabere ahụ. Aga m egosi gị akụkụ kachasị mkpa nke mepụtara ọrụ.
Ya mere tinye ndepụta ime ebe a. Ya mere ndepụta ihe ị ga - eme nwere ike ịga mgbatị ahụ, nke a nwere ike ịbụ ndepụta ịme ihe ma ị nwere ike kụrụ Tinye ma ozugbo ị banyere ịbanye na ọrụ ahụ, ga - aga igbe nlele nke ị tinyere ebe a, yabụ nke a bụ igbe mbata m. N'ebe a ka m mere nke ahụ, m ga-egosikwa gị ntọala ole na ole ọzọ nke mere na mgbe m pịrị ya ọ na-enye m nhọrọ niile dị na peeji a ka m nwee ike ịtọ ụbọchị kwesịrị ka anyị kwuo na nke a bụ maka taa ma enwere m ike ịme ya ọ bụla ụbọchị ikwugharị.
Yabụ ọ bụrụ na m chọrọ ịga mgbatị ahụ kwa ụbọchị, enwere m ike ichetara onwe m kwa ụbọchị, kụrụ Emela ma ị nwere ike ịtọ ihe ncheta a n'otu oge na 6: 00Pm. You'll ga-emepụta subtask n'okpuru ọrụ a ka ị nwee ike ịme subtasks dị ka cardio maka mgbatị ahụ. Nke ahụ nwere ike ịbụ obere ọrụ n'okpuru nnukwu ọrụ a, yabụ mgbe m pịa ya enwere m ike ịhụ ihe ị ga-eme n'okpuru isi ihe a.
Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji hazie ya dị ka ụzọ ụzọ. Ya mere, ka anyị kwuo na ị chọghị ọrụ nke ihe ị mepụtara, gaa n'ihu ma họrọ ya ma ị nwere ike ihichapụ nke ahụ site na ịpị ihe mkpofu ebe a. Yabụ ọ bụrụ na m pịa ahịhịa ahụ ọ ga-emenyụ ime nke ahụ.
M pịa ya ọzọ. I nwekwara ike tinye ihe ndetu na ọrụ, tinye ihe na ọrụ ahụ, ma tinye ha na ọkacha mmasị gị. Yabụ mgbe ịpịrị kpakpando ahụ, ọ ga-abụ ihe kacha mkpa.
ele ihe anya 2013 appcrash
Nọ n’elu ndepụta ndepụta-ime ma ọ bụrụ na ị pịa ya ebe a ọ ga-apụ. Ya mere, m ga-aga n'ihu wee wepu ncheta a kwa ụbọchị ebe a na mgbe ịmechara ọrụ ahụ niile ị ga - eme bụ ịlele akara akara ma ọ ga - apụta n'okpuru ọrụ zuru oke ma ọ ga - adị ka nke a oge ọ bụla ị na - pịa na ị nwere ike ịga n'ihu wee pịa ya ọzọ, ị ga-awụlikwa folda dị iche ebe a, yabụ na ọ bụghị igbe mbata m ebe a, m na-aga Daily Tasks ma mgbe m pịa nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a ebe a, dịka ọmụmaatụ nke a emepụta otu ugboro ise n'izu Tech Tech, enwere m ike ịkekọrịta nke a na onye ọzọ ka m wee tinye ndị ọzọ karịa ndị otu m na ndepụta m. Nke a bụ akaụntụ nke onwe m ka m wee mee nke a, mana nke a bụ ụzọ dị mma iji rụkọta ọrụ ndị ọzọ ị nwere ka ị nwee ike ịmepụta ma mepụta folda maka ọrụ.
Yabụ ugbu a mepụta ọrụ, kekọrịta ya, ma mepụta ọrụ maka onwe gị. Ugbu a, ka m gosi gị otu esi ahazi nke a na folda. N’aka nke ọzọ, ihe ndị a niile bụ ụzọ dị iche iche m na-esi ahazi ọrụ m ka m nwee ike na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Ihe ndị a kwesịrị ịbụ kwa ụbọchị n’izu. Enwere m ike ịnwe ọrụ maka otu ụzọ n'ụzọ anọ, yabụ enwere m ọtụtụ ọrụ maka Q12018, ma ị nwere ike ịrụ ọrụ kwa ọnwa, ọrụ kwa izu. Otú ọ dị.
Want chọrọ ịhazi ya. Nke a bụ ụzọ dị mma iji hazie oge maka 2017 dịka ọmụmaatụ, emere m ọtụtụ ọrụ kwa ụbọchị yabụ m tinyere ụbọchị, teta n'ụra, hazie ihe m ga-eme ụbọchị ahụ ma hazie ya otu a na ịmaatụ ụbọchị ahụ , ọ dị ka m mere ihe 30 nke m mechara ụbọchị ahụ ma hazie ha ozugbo 2017 nọ na folda a maka ọwa a maka ọwa youtube, enwere m ọtụtụ isiokwu m ga-edekọ Ya mere m mere to- mee ndepụta ka m gosi gị otu esi emepụta folda a, kụrụ aka gbakwunyere ebe a wee gaa n'ihu depụta aha ka ịchọrọ ịmepụta listi ọhụrụ, ka anyị nweta nke a Kpọọ isiokwu. Aga m aga n'ihu wee pịa OK.
Achọghị m ịdepụta ndị otu, mana ị nwere ike ime nke a tupu ị mepụta ndepụta ahụ ma ozugbo e mepụtara ndepụta ahụ ị nwere ike pịa nri ma ọ bụ nye iwu ebe a wee mepụta folda yabụ m ga-ekepụta folda wee kpọọ folda a ugbu a enwere m ihe m ga-eme na folda a ka m nwee ike ịga n'ihu wee gbasaa ya dị ka Finiti ma ọ bụrụ na m nwere ọrụ m niile, ihe m na-eme ebe a. Enwere m ike ịga lee ma hụ ihe dị iche iche, yabụ na ọwa YouTube dị iche iche m nwere ebe a bụ ndepụta nke ha, ihe niile dị na folda a bụ isi, ị nwere ike ijide ihe m tinyere na folda dị iche iche, dị mfe ma weta ya ha dozie nke a ma ị nwere ike iji aka nri pịa ya wee nyegharịa ya ma wepu otu folda ka ọ pụta na folda ahụ ma ọ bụrụ na m chọrọ ihichapụ ọrụ a, enwere m ike ịme nke ahụ ọzọ pịa aka nri ma ọ bụ bịa wee pịa ma hichapụ ya ya na ọ ga-apụ apụ ka m wee hazie ọrụ m na nchekwa ma mgbe ụfọdụ m na-etinye ha na igbe ebe m ga-ehichapụ ha ozugbo Mepụta kwa ụbọchị ime ndepụta m mere ka e nwee ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji hazie nke a wee nweta ọtụtụ n'ime ya. Naanị ka m gosi gị ihe ikpeazụ, mgbe ị rutere ntọala Wunderlist, ma ọ bụ na PC m chere na ọ dị n'okpuru ntọala faịlụ ahụ, gaa n'ihu ma lelee n'okpuru ọkwa na ị nwere ike ịtọ ya n'ụzọ a na a ga-enweta ọkwa desktọọpụ ya mere na Mac ndị a ga-agbapụta na desktọọpụ m, ma ọ bụ ịnwere ike ịnweta ozi email nke ahụ bụ email ị debanyere aha maka akaụntụ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji Gmail ma ọ bụ Facebook, nke ahụ bụ email ahụ m tinyere, m ga-anọ na desktọọpụ m ogologo oge. Emechara m gbanyụọ email ya mere na anaghị m elele email site na listi ndị ịtụnanya Mana nke a bụ nhọrọ dị ukwuu maka ịdebe ihe ịkwesịrị ịme yana mgbe ịchọrọ ya, enwere m olileanya na nke a enyerela gị aka, ọ bụrụ jiri ndepụta dị ka nke a, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị arụpụta nke m meworo n'ime afọ ole na ole gara aga nke gafere ọganihu m na YouTube na ihe ndị dị na azụmaahịa m na ndụ onwe m. Echere na ị nwere ike iji ngwa a, ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, biko nye ya mkpịsị aka aka ma denye aha na ọwa a.
M biputere Nkuzi na ọwa a dị ka nke a ugboro ise n'izu ka olileanya ịhụ gị n'isiokwu na-esonụ Daalụ maka ikiri isiokwu a
Kedụ ka m ga - esi tinye todos Na Wunderlist m?
Ihe kachasị mma bụ na Wunderlist na-edebe ihe niile na-arụ ọrụ na mmekọrịta na ngwaọrụ niile. Email na Ndepụta - Nke a bụ njirimara pere mpe: ị nwere ike izipu todos na Wunderlist gị. Naanị email 'me@wunderlist.com' ma gbakwunye ọrụ gị na Wunderlist gị. (Isiokwu bụ ndepụta ịchọrọ ịgbakwunye na, ma tinye todos na ozi nke ozi ahụ.)
Esi esi na Wunderlist gaa Microsoft ime?
Microsoft In-Do mechara tinye atụmatụ a na menu ziri ezi mgbe ịhọrọ ọrụ. Naanị họrọ Tinye nzọụkwụ ma pịnye aha usoro ahụ. Kụrụ banye ịkwaga nzọụkwụ ọzọ wee gaa n'ihu ruo mgbe ịmechara. Mgbe emechara, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na isi ọrụ nkọwa (a atụmatụ kọrọ site Wunderlist). 4. Ihe edeturu
Kedu ka m ga - esi tinye ọrụ na Wunderlist m?
Naanị email 'me@wunderlist.com' na agbakwunye ọrụ gị na Wunderlist gị. (Isiokwu bụ ndepụta ịchọrọ ịgbakwunye na, ma tinye todos na ahụ nke ozi ahụ.) Nke a bụ kemfe mgbe ị na-arụ ọrụ email gị ma chọọ ịgbakwunye todo dabere na ozi ị natara.
Ebee ka m ga-achọta adreesị ozi-e Wunderlist m?
Họrọ akara ngosi ntọala na aka nri aka nri nke ibe Microsoft To-Do ma họrọ bọtịnụ Bubata n'okpuru Bubata na Wunderlist. Na usoro mbu nke usoro a, ị ga-ahụ akaụntụ Wunderlist nke Microsoft ghọtara n'okpuru adreesị email gị.